Itekhnoloji ye-Geospatial, indima yayo kunye nokubaluleka kwayo kubume be-IT kumaSebe ezoThutho. -Geofumadas
NgoSeptemba, 2017 Geospatial - GIS, GPS / Izixhobo, ezintsha
Te knoloji. Ufunyenwe epheleleyo iteknoloji esetyenziselwa ukufumana, ukulawula, ukuhlalutya, ukujonga ngokucacileyo nokusabalalisa zombini idatha kunye nolwazi olubhekiswe kulo indawo into ethile, idlulisele ukuqala kokuqala kombono we-GIS, i-GPS kunye ne-Remote Feelings (i-RS ngesiNgesi) ibandakanya ezo teknoloji ezikhulayo ezisebenzisa indawo yendawo (umzekelo, geofencing) kwimeko apho, phakathi kwezinye izizathu, "ubuchwephesha buya kuhlanganiswa kunye nemida yabo ngokugqithisa"
Enyanisweni, emva kokubonakaliswa kwangaphambili malunga ukuguquka kweGIS, imiqathango enxulumene naye kunye abaqeqeshiweyo kule ndawo; Kubonakala kubonakala ukuba ngoku sifanele sihambe "kwintsimi yesenzo" size sixoxe ngeemeko ngqa apho ezo ngcamango ziyasetyenziswa.
Ndiya kubuya ke ukufunda le nqaku kaBruce Aquila ukuze ndikhuphe amagama angundoqo apho eli nqaku liqalise namhlanje. Ndikhipha ezintathu (3) kwaye ndiyakwazi ukuqala:
Ukuguquka kwemvelo. I-WebGIS (i-GIS esebenzisa ubuchwephesha beWebhu) ifakwe njengomzekelo wokutshintsha kwe-GIS apho zixhobo yenkqubo (i-Hardware, Software, idatha kunye nabasebenzisi) ayifuni yonke into ngokwenyama kwindawo enye kunoko, ngoku kuphuhliso olutsha, ulwazi olunikezwa kumsebenzisi lufikeleleka ngokukhawuleza, ngokukhawuleza nangokuqoqosho usebenzisa izivumelwano eziyimfuneko kunye nemigangatho evumela uxhulumaniso kunye nokutshintshiselwa kwamacandelo. Le ndlela "yokukhonza" ulwazi luvumela iWebGIS ukuba ifuneke kwi-intanethi kwaye iyaziwa IiNkonzo zewebhu
Ngaphandle kokulibala ukuba i-WebGIS ingaqaliswa ngeendlela ezahlukeneyo: kwi ifu, ekuhlaleni okanye njengokudityaniswa kokubini kuxhomekeke kwityala, ngoku elibalulekileyo emsebenzini wethu.
Ukuzonwabisa. Kwiziko ezifana neSebe lezoThutho naliphi na urhulumente karhulumente, apho indawo iyona nto eyona nto ibalulekileyo yokusebenza, yinto luleke kakhulu ukuvelisa iziphumo ezivumela ukuba kwenziwe izigqibo ezaneleyo kwimisebenzi kunye neeprojekthi ezinxulumene nokusebenza, iindlela zendlela, ukhuseleko, ubunjineli kunye nolondolozo, phakathi kwezinye iindawo.
Sibona ukuba iteknoloji ye-geospatial esetyenzisiweyo isisiseko kule nkqubo. Kodwa, kwaye ngenxa yokuba ukwenziwa kweeNkonzo zeWebhu kunye nokuphunyezwa kweWebhu yeGIS ngazo naziphi na iindlela zayo kusibhekisa ekusebenziseni i-IT ("oTekhi" phakathi), kufanelekile ukuzibuza ukuba leliphi icandelo lesebe (DOT ngesiNgesi) Ngaba itekhnoloji ye-geospatial ingakulungela ngokufanelekileyo ngokufanelekileyo ukunceda ekuthathweni kwezigqibo ezifanelekileyo kunye nenkqubo efanelekileyo?
UAkwila, yakhe nqaku Lo mbuzo uvela kuba, njengoko siza kugqiba kamva, iyacebisa utshintsho kwaye basebenzise izizathu zazo.
"Ngokwesiko, le teknoloji yahlala kwisahlulo sokucwangcisa", uyongezelela, yongezelela ukuba oku kubangelwe, phakathi kwezinye izizathu, kwindima yayo njengesixhobo sokuhlalutya ekwenzeni izigqibo kunye nomsebenzi wayo oyintloko ekufakeni iimfuno ezininzi zokudala imephu. .
Nangona kunjalo, u-Akhwila uyaqhubeka, njengoko ubuchwepheshe bezithuba zenzeka, baqala ukudibanisa kunye neDBMS. Ngaloo ndlela, i-DBMS efana ne-Oracle, iSQL Server, iDB2, ne-PostgreSQL isekela izitrato zeenkcukacha zendawo yokuhlala, eziye zanciphise ukutyekela ukufaka iingcamango zendawo kwindawo yokwakha ye-IT ye-DOT.
"Ukongeza, ii-DOTs zisebenzisa inani elikhulu leenkonzo zewebhu ukusebenzisa ulwazi oluxabisekileyo olugcinwe kuvimba wolwazi" uyaqhubeka umbhali, ukuze kamva athi "kuthathelwa ingqalelo ukuhlaselwa kwe-cyber rhoqo rhoqo namhlanje, amasebe e-IT kufuneka ukuba nolawulo olungqongqo kwiindidi ezahlukeneyo kunye nokusetyenziswa kweenkonzo zewebhu ezenziweyo ”athe wafumanisa ukuba le iya kuba yenye into enokuthi incede" ukufuduswa "ukuya kwicandelo le-IT le-DOT.
Khankanya iphuzu lokuhlalutya kwakho, ubunokwenzeka bokuguqulwa kwiiplatifti zedesktop ezisetyenziswayo kubeni kukho ukuhla okucacileyo "kuxhomekeke kwi-teknoloji yendawo yekhompyutha"; ngenxa yokunyuka kweenkonzo zewebhu ezinciphisa uhlahlo lwabiwo-mali, kugxininisekisa ukusetyenziswa kwesofthiwe yedesktop "imisebenzi yokuhlalutya inzima".
Ukuvela kweprogram yefu kunempembelelo ekuhlanganiseni kwisakhiwo se-IT. Oku kungenxa yokuba ii-DOT ziqala ukuqwalasela izicelo zokwakha efini. Ukuqwalasela apha njengento ebalulekileyo ekulawuleni khu seleko oko, ngokucacileyo, kuxhalabisa isebe le-IT. Kule ngongoma, uthi, uhlalutyo lokuqala ludinga ukugqiba apho umphathi izicelo ezivelisiweyo: ngaphakathi okanye kusetyenziswa "iinkonzo zentengiso yefu". Makhe sibonge ukuba kwesi sihloko sizathu ntetho eyenziwe nguAkwila kunye nezinye iingcali esicetyisayo ukuba sifunde abo bafuna ukunweba kule ndawo.
Okwenziwe nguAkwila ikakhulukazi "ukufuduka" yonke into oko kukuxhalabisa ubuchwepheshe be-geospatial kwi-IT indawo ye-DOT ngezizathu ezichazwe ngasentla.
Yazi ukuba olu tshintsho luya kudala uxhathiso kunye nomzabalazo wokuphepha ukuphulukana nolawulo kwikomkhulu lemveli; utshintsho, ukuba luyenzeka, luya kufuna ixesha lokwamkelwa ngamaziko "achaphazelekayo". Ke ngoko, uqukumbela ngelithi "yonke into kufuneka yenziwe ukuze kuzuze okuhle okuqhelekileyo."
Sigqiba eli gqabaza, ngendlela evulekile, ukuphakamisa le mibuzo elandelayo:
Ngaba siyavumelana nombhali?
Ngaba siyazi ukuba yintoni ishadi elisebenzayo lokubambisana ne-DOT kwindawo yethu?
Yintoni esiyicinga ngayo?
Post edlulileyo«Ngaphambilini Phila-Iqhwithi i-Irma-Umbutho uqhela ukusebenzisana ne-geospatial
Post Next Ngaba sixubene ngokwenene kwinkqubo "entsha" xa kuziwa kwi-3D Spatial?Okulandelayo »